Iindaba - Amaphepha e-Acrylic
Ngokutsho kohlalutyo lwe-MRFR, i-Global Acrylic Sheets Market kulindeleke ukuba ibhalise i-CAGR engaphezulu kwe-5.5% ukufikelela kwixabiso elimalunga ne-USD 6 Billion ngo-2027.
I-acrylic yinto ebonakalayo yeplastiki enamandla aqaqambileyo, ukuqina, kunye nokucaca kokukhanya. Ishiti lilula ukuyila, iqhina ngokuncamathisela kunye nezinto ezinyibilikisayo, kwaye kulula ukuyenza ithermoform. Izinto eziphathekayo zineempawu eziphezulu zemozulu xa kuthelekiswa nezinye iiplastiki ezibonakalayo.
Ishidi le-acrylic libonisa iimpawu ezifana neglasi ezifana nokucaca, ukukhanya kunye nokubonakala. Ikhaphukhaphu kwaye inefuthe eliphezulu lokuxhathisa xa kuthelekiswa neglasi. Ishidi le-acrylic laziwa ngamagama amaninzi anje nge-acrylic, iglasi ye-acrylic, kunye ne-plexiglass.
Imarike ye-acrylic sheet yentengiso ikakhulu iqhutywa kukusetyenziswa kwayo kulwakhiwo nakwimizi-mveliso yokwakha kwizicelo ezahlukeneyo ezinje ngeeprojekthi zokuphucula ikhaya, ukubuyela umva ekhitshini, iifestile, izahlulelo zodonga, kunye nefenitshala yasekhaya kunye nokuhombisa, phakathi kwabanye. Amashiti e-acrylic lukhetho olufanelekileyo lwezinto ezibonakalayo ngenxa yeepropathi eziphezulu ezinjengokucaca okuhle kokukhanya, amaxesha ali-17 okuchasana nefuthe xa kuthelekiswa neglasi, ukukhanya okuncinci, ubushushu, kunye nokumelana nemichiza.
Ukongeza koku, isetyenziswa ngokubanzi kuthengiso kunye nokuyila ubume bemozulu kunye neewindows ezinganyangekiyo kwisaqhwithi, iifestile ezinkulu kunye neebhulethi, kunye nezibhakabhaka ezihlala ixesha elide.
Abadlali abasebenza kule marike bajolise kumalinge ahlukeneyo esicwangciso njengokwandiswa kunye nokwaziswa kwemveliso. Umzekelo, ngo-Epreli 2020, inyuse ukuveliswa kwamaphepha e-acrylic abonakalayo ngama-300% ukuxhasa ukwenziwa kweendonga zokukhusela ezempilo e-UK nakwamanye amazwe aseYurophu ukuphendula kwimfuno ekhulayo yokukhusela kubhubhane we-COVID-19.
I-ASTM D4802 icacisa isikhokelo sokuveliswa kwamaphepha e-acrylic ngokweenkqubo ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, iphepha le-acrylic izinto ezingafunekiyo zibandakanya i-vinyl acetate okanye i-methyl acrylate, eziyimicu eyenziweyo eyenziwe nge-polymer (polyacrylonitrile). Imigaqo kwimpilo nakwimingcipheko yengozi kwezi zinto zivelisayo ichaphazela ukuveliswa kunye nokusetyenziswa kwamashiti e-acrylic.
•Iphepha le-Acrylic elikhutshiweyo: La maphepha aphantsi kumgangatho xa kuthelekiswa ne-acrylic sheet, kodwa anezihlandlo eziphindwe kathathu zokuchasana nefuthe kuneglasi yefestile yamandla aphindwe kabini kodwa inobunzima ubuncinci ngesiqingatha. Basebenza kakuhle kumatyala abonisiweyo, ukukhanya, imiqondiso, kunye nokubiyela, kunye nezinye izinto ezininzi. Amashiti anokuba ngumbala opeyintiweyo okanye oqaqambileyo okristale, kuxhomekeke kwimfuno, kwaye uya kuba tyheli okanye ubune ekuhambeni kwexesha.
•Iphepha le-Acrylic Sheet: I-acrylic cast iphosakeleyo, ayinakuchaphazeleka, kwaye ihlala ixesha elide. Inokwenziwa ngokulula nakweyiphi na imilo enqwenelekayo, iza ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu, ubukhulu kunye nokugqitywa, kwaye isebenza kakuhle kuyo yonke into ukusuka kumacala okubonisa ukuya kwiifestile. Icandelo lahlulwe ngakumbi kwiseli ye-acrylic sheet kunye nokuqhubeka kwe-acrylic sheet.